अध्यात्मको बाटोमा-२२ ( परमात्मा के हो ? को हो ?) – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
Jul 7, 2020 Spiritual
अध्यात्मको बाटोमा-२२ ( परमात्मा के हो ? को हो ?
जबसम्म आत्मा के हो भन्ने बुझिदैन तबसम्म परमात्मा बुझ्न सकिदैन । मैले जति बुझ्न सके त्यो मैले आत्माको बारेमा अघिल्लो अध्यात्मको बाटोमा-२१ मा प्रष्ट पार्न खोजेको छु । आत्माको बारेमा संक्षिप्त बुझ्न तल उल्लेखित श्लोकले निर्दृष्ट गर्दछ ।
अर्थ: “आत्मालाई कुनै शास्त्रले काटन सक्दैन,त्यसरी नै अग्निले जलाउन सक्दैन | यसलाई पानीले भिजाउन, बगाउन, डुवाउन न त हावाले सुकाउन नै सक्छ | आत्मा मर्दैन, स्थुल सरिर नासवान छ” ।
यी माथिका श्लोकले आत्मा भनेको जीवको मालीक हुन अर्थात जीवलाई संचालन गर्ने शक्तिमान तत्व हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । परमात्मा ब्रमाण्डको संचालक सर्बशक्तिमान तत्व हो |
परमात्मा शब्द आत्मासंग जोडिएर बनेको शब्द हो । परम +आत्मा = परमात्मा, यसलाई व्याख्या गर्दा परम भनेको सर्बोत्तम र सर्बोच्च हो । परमात्मा भनेको सर्बोच्च आत्मा भन्ने अर्थ लगाइन्छ । आत्मा परमात्माको आंशिक तत्व हो भने परमात्मा सम्पूर्ण ब्रमाण्डीय तत्वको आत्मा हो । अर्थात अंग्रेजीमा आत्मालाइ soul भनिन्छ भने परमात्मालाई cosmic soul भनिन्छ । आत्माको पनी आत्मा नै परमात्मा हो ।
“अतीव शुक्ष्मं परमात्मतत्वं न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तुमर्हति”
अर्थ : परमात्मा तत्व अन्त्यन्त शुक्ष्म छ , स्थूल दृष्टिव्दारा उसलाई कसैले देख्न सक्दैन र प्राप्त पनी हुदैन ।
परमात्मा निराकार, निरन्जन, सर्वव्यापी, शुक्ष्ममा अती शुक्ष्म, अविनाशिनी र सम्पूर्ण ब्रमाण्डमा रहेका दृष्टित वा अदृष्य सम्पूर्ण ग्रहहरु, ताराहरु, जड, किटपतंग, बनस्पति र जीवात्मा समेतलाई प्रकृतिको नियमनमा बाधेर संचालन गर्ने सर्बशक्तिमान तत्वलाइ नै परमात्म भन्न सक्दछौ ।
सम्पूर्ण ब्रमाण्डमा रहेका जड जीवात्मा भित्र लुकेर बसेको चैतन्य शक्तिको नाम नै परमात्मा हो । हामीभित्र रहेको तत्व परमात्माको शुक्ष्म तत्व हो अर्थात एउटा सानो बिन्दु मात्रै हो । त्यसैले आत्मा परमात्माको अंश मानिएको छ । हामी भित्र भएको आत्मा स्वरुपलाई हाम्रा इन्द्रियाहरुले चिन्न सक्दैनन, यदि हामि भित्र भएको बुध्दिमत्ताले आत्मबोध भयो भने आत्माको उपस्थितिको आभास पाउने छौ । जडमा रहेको परमात्मा तत्व सुसुप्त हुन्छ भने जीवात्मा भएको परमात्मा तत्व सुसुप्त नै हो तर हामी भित्र भएको बोध र बुध्दिमा भने अलिकती जागृत भएको अबस्था पनी हुन् सक्दछ। जुनदिन हामी बुध्दत्व प्रात गर्दछौ त्यतिखेर हाम्रो जागृत अबस्था हुने छ । संक्षिप्तमा भन्ने हो भने परमात्मा कुनै व्यक्ति होइन, परमात्मा भनेको यस जगतको नेपथ्यमा रहेको बुद्दिमत्ता अपारशक्तिको केन्द्र हो । कुनै पनि बस्तुको बिजले आफ्नो स्वरुप के बन्ने हो भन्ने पूर्ण रुपले जान्दछ । त्यो बिजले कस्तो र के फल दिलाउने भन्ने कुरा उसले भालिभाती जानेको हुन्छ । उसको पात हरियो की रातो बनाउने अथवा उसको हाँगा कति माथी पुर्याउने अथवा जरालाई कति जमिन भित्र पुर्याउने ताकि उसले आफ्नो जीवन बचाउन सकियोस, कस्तो फल फलाउने हो तितो मिठो भन्ने कुरा बिजलाई थाहा छ, त्यो बिजको बुद्दिमता हो, त्यो तत्व नै परमात्मा तत्व हो । । जगतको सारा जड, बनस्पति र जीवको अस्तित्व प्रारम्भमा स्थित बिजको बुद्दिमत्ताले भरिएको छ । संवेदना छ, चेतना छ, बन्नस्पतिमा पनी छ भने ढुंगा माटोमा पनी त्यस्तै सबेदना र चेतना भएको प्रमाणित गर्न सकिने छ । परमात्माको अर्थ सारा जगत संबेदनशिल छ, संबेदनहिनता हुनै सक्दैन । यस जगतको पछाडी एक बुद्दिमता छ जसको कारणले यो सम्पुर्ण कुराको नियन्त्रण र नियोजन गर्दछ ।
कर्म आफैले फल दिने होइन, यस जगतको बुद्दिमत्ताले फल प्रदान गर्ने हो । प्रत्येक कर्मको पुरस्कार र दण्ड जगतको बुद्दिमत्ताले दिने हो । हामीले यस जगतप्रति गरेको जस्तो कर्म गर्दछौ, त्यसै अनुसारको कर्म जगतले हामीलाई प्रदान गर्दछ । संसारमा भलाइ गर्यो भने जगतले तपाइ हाम्रो जीवनमा पनी भलाइ नै गर्दछ । तर कहिले काँही भलाइ गर्ने क्रममा परिणाम स्वरुप नोक्सान भएको पनी हुन् सक्छ ? यहाँ कर्म को नियतमा पनी भर पर्दछ । नियत राम्रो राखेर गरिएको कर्मको फलले आफुलाई राम्रो फल नदिए पनी नोक्सान गर्दैन । नोक्सान गर्न गरिएको कर्ममा कसैलाई भलाइ भएको हुन् सक्छ ? तर त्यसको नियत भने खराब थियो । त्यस्तो अबस्थामा जगतको बुद्दिमताले फल दिने हो । यदि हामीले मुर्ख घमण्डीलाइ भलाइ गर्न खोज्यो भने उसले आफुलाई अपमानीत गराउन गरिएको भन्ने अर्थ लगाउन पुग्छ र उल्टो तपाइँ हामी माथी समस्या आउन पनि सक्छ तर बुध्दिमान मानिसमा राम्रो ब्यबहार गर्यौ भने असल परिमाण पाउन सकिन्छ । यदि संसार यदि जड मात्रै हो भने कुनै अस्तित्व नहुने भने त्यसको पछाडी कुनै बुद्दिमत्ता नहुने हो भने कर्मको फल कुनै हालतमा प्राप्त हुने थिएन । कहिले काँही आफुले भलो गरेको तर फल भने नराम्रो प्राप्त गरेको भन्ने धेरै सुनिन्छ । तर हामीलाई लागेको हुन सक्छ भलो गरेको तर त्यो आफ्नो अहम र स्वार्थको लागी गरिएको हुन् सक्छ ? हामीले आफुलाई लागेर होइन, त्यो जगतको बुद्दिमत्ता परमात्मालाई लागेको हुन पर्दछ । त्यसैले कर्मफलको बारेमा भागवत गीतामा श्री कृष्णले भन्नु भएको छ ।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोSस्त्वकर्मणि ||४७||
परमात्मालाइ परमेश्वर पनी भनिन्छ । परमात्मा परमेश्वरलाइ निराकार, निरन्जन, सर्वव्यापी, शुक्ष्ममा अती शुक्ष्म, अविनाशिनी, र अदृश्य हुनुको साथै यस ब्रमाण्डको शृष्टि कर्ता मानिन्छ । परमात्मा परमेश्वरलाई न आजसम्म न कसैले देखेको छ, न त कसैले यो नै परमात्मा परमेश्वर हो भनेर प्रमाणित नै गर्न सक्दछ । त्यसैले मलाइ लाग्दछ परमात्मा निराकार, निरन्जन, सर्वव्यापी, शुक्ष्ममा अती शुक्ष्म, अविनाशिनी र अदृश्य र यस ब्रमाण्डको शृष्टि कर्ता हुनुको साथै एक रहस्यात्मक अलौकिक दिव्य शक्तिपुञ्ज हुन । जसले यो ब्रमाण्डमा व्याप्त सृष्टि र प्रकृतिलाइ आफ्नो नियन्त्रणमा सन्तुलन राखेर संचालन गरिराखेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
मानवजातीले मानी राखेका धर्म इशाई, इश्लाम, यहुदी र हिन्दु र हिन्दुधर्मका अनेक शाखामा मानिने भगवान, देवी, देवता, यशु , मोहम्मद, बुध्द, राम कृष्ण जति पनी मानिराखेका छौ । काँही न काँही सर्बसाधारण मानिसमा भन्दा परमेश्वर परमात्माको अंश केहि बढी भएकोले हामीले देवता मानिराखेका छौ । येशुले आफुलाई परमेश्वरको पुत्र बताउनु भएको छ । इश्लामहरुले पनी अल्लाहलाई परमेश्वर मानेका छन् र मोहम्मदलाई अल्लाहका दुतको रुपमा मान्दछन ।
भागवत गीता १८/ ६१-६२
भावार्थ : “परमात्मा परमेश्वर शरिररूप यन्त्रमा आरुढ़ भएका सम्पूर्ण प्राणीहरुमा आफ्नो मायारूप शक्तिले घुमिरहेर सबै प्राणीहरुको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ । हे अर्जुन ! तिमि सम्पूर्ण भावले परमेश्वकै शरणमा पर, उही परमात्माको कृपाले परम शान्ति र सनातन परमधाम प्राप्त हुन्छ” ।
भागवत गीता अध्याय ४/ ४
अर्थ: “ हे कुन्ती पुत्र समग्र योनीमा जति स्वरुपको प्राणीहरु उत्पन्न हुन्छन ति सबैको प्रकृति गर्भाधार्ण गर्ने आमा हुन र म परमेश्वर बिज स्थापना गर्ने पिता हुम “।
तर भगवान श्रीकृष्णले भागवत गीता अध्याय ४को श्लोक ४ भने आफुलाई नै परमात्मा परमेश्वरको रुपमा मान्न भन्नु भएको छ । या त साँचो हो यात कृष्णका भक्तहरु ( प्रत्यक्ष्य दर्शी संजय) ले अतिरन्जित व्याख्या गरेका हुन ? श्री कृष्ण इश्वर र देवताको रुपमा सर्ब स्विकार्य त हुदै हुनु हुन्छ । त्यसैले भगवान देवता र इश्वरलाइ समेत परमात्मा परमेश्वरले इक्ष्याले मात्र जन्मेका हुन । जसमा परमात्मा परमेश्वर इक्षा मुताबिकको शासन अनुसासन गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
संसारमा यस्ता थुप्रै बस्तुहरु छन जो अन्त्यन्त महत्वपूर्ण र सुक्ष्म छन् जसलाई हामीले देख्न सक्दैनौ । तर त्यो नभए प्राणी र बनस्पति र संसारको कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौ । उदारहणको लागि हावालाइ लिउ, जुन हावामा हामीलाई चाहिने प्राण वायु अक्सिजन हुन्छ, यो बिना जीवनको कल्पना पनी गर्न सकिदैन । कार्बनडाइअक्साइड बनस्पतिलाइ नभई नहुने हुन्छ । यसैको सहारा लिएर बनस्पतिले सुर्यको प्रकाशसंग फोटोसेन्थेसीस गरि आफ्नो खाना बनाउछ र मानिसलाई चाहिने अक्सिजन उत्पादन गर्दछ । हामीले आफ्नै आँखा अगाडी भएको बस्तुलाई त देख्न सक्दैनौ भने परमात्मा परमेश्वरलाई कसरि देख्न सकिन्छ ? हामीले संसार देख्ने आफ्नै आँखा पनी आफैले देख्न सक्दैनौ । त्यसको लागी त ऎनाको सहयोग चाहिन्छ भने अझं मान्छे मन, बुद्धि, आत्मालाई कसरि देख्न सकिन्छ ? यदि मानिसमा आत्मज्ञानको ढोका खुलेको अबस्थामा परमात्मको अनुभूति पाउन सक्छ होला ? तर त्यो सौभाग्य सबैले कहाँ पाउछन र ! परमात्माले शृष्टि गरेको कुनै एउटा पदार्थको गुण धर्म र उपयोगिता पत्ता लगाउनेलाइ हामीले बैज्ञानिक भनिराखेका छौ । मानिसहरु भन्दछन परमात्मा अस्तित्व कहाँ छ ? कसले देखाउन सक्छ ? भन्दछन । जसले आफुले प्रत्येक क्षण सास लिने प्राण वायु त देख्न र देखाउन सक्दैन भने यो ब्रमान्डको भवचक्रको ब्यबस्थापन गर्ने परमात्मालाइ कसले देख्न र देखाउन सक्छ र ?
त्यसैले आत्म ज्ञानी मानिसहरुले परमात्माको अस्तित्व स्विकार्ने हो, उसको खटनपटन मार्गदर्शन गरेको कुरा अनुसरण गर्ने हो । हामीले देखेरहेका कुराहरु सत्य नहुन पनी सक्छन, नदेखेका कतिपय कुराहरु सत्य पनी हुन्छन । यो सारा श्रीष्टि अन्त्यन्त रहस्यमय छ, यसलाई आत्मसात र आत्मज्ञान प्राप्त गर्न अन्त्यन्त कठिन छ । आत्मज्ञान र आर्जित ज्ञानको कमि भएपछि मान्छेले खान लाउनलाइ कै लागी उसले जीवन कठिन भन्दा कठिन काम गर्न पर्ने हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने खान त चरा मुसाले पनी खाएकै छ भन्नु हुन्थ्यो हाम्रा पिता माता । धर्तीमा मान्छे भएर जन्मेपछी यो संसारलाई केहि न केहि दिएर जानु पर्छ अर्थात असल कर्म गरेर मात्र जानु पर्छ । खराब कर्म गरेर आफ्ना सन्ततिलाई पापको भार बोकाएर जति सम्पती जमा गरेर गए पनी सन्तानको कल्याण हुदैन भन्नु हुन्थ्यो मेरो बुवाले पनी । वास्तवमा हामी मानव परमेश्वरका नै सन्तान हौ, माता पिता हाम्रा माध्यम हुन । त्यसैले हामीले आफ्ना मातापितालाइ परमेश्वर कै दर्जा दिएका पनी छौ । मानिसहरुले यस धर्तिमा यो प्रकृति र समस्त प्राणीहरुको उद्दार र संरक्षण गर्दा परमात्माको अभिप्राय पुरा हुन्छ । परमात्मको शक्तिपुञ्ज शौर्य बढेर जाने छ । बिभिन्न योनीहरुलाई पारगरेका आत्माहरुलाइ मुक्ति प्रदान गर्न परमात्मा आतुर हुनुहुन्छ भन्ने आत्मज्ञानीहरुले भनेको सुनेको छु । सबैले आआफ्नो बुद्दिको क्षमता अनुसार परमात्मालाइ बुझ्ने हो । मैले परमात्मा परमेश्वरलाई यसरी बुझेको छु ।
( यो मेरो बुझाइ र लेखाइमा केहि सल्लाह सुझाब दिनु भए अनुग्रहित हुने थिए ।)